UEFA oo la xiriirtay Booliiska Turkiga iyo Xiriirka Kubadda Cagta dalkaasi si loo sugo ammaanka taageeryaasha Man United – Gool FM
UEFA oo la xiriirtay Booliiska Turkiga iyo Xiriirka Kubadda Cagta dalkaasi si loo sugo ammaanka taageeryaasha Man United
(Istanbul), 31 Okt 2016 –Xiriirka Kubadda Cagta Qaaradda Yurub ee UEFA ayaa la xiriiray Booliska Waddanka Turkiga iyo Xiriirka K/Cagta dalkaasi iyagoo ka dalbaday sidii xoogga loo saari lahaa sugidda ammaanka Taageerayaasha Manchester United ciyaarta ay Fenerbahce kula dheeli doonaan magaallada Istanbul.
Manchester United ayaa habeenka Khamiista ah ciyaar ka tirsan Europa League qaybta (A) waxay Turkiga kula ciyaari doonaan Fenerbahce.
Sabtidii ayay ahayd markii dowladda Mareykanku ay muwaadiniinteeda ugu baaqday in ay isaga soo baxaan Turkiga, halka digniintaasina ay saameysay muwaadiniinta Ingiriiska, waxaana UEFA ay shaacisay in iyadoo arrintaasi laga amba qaadayo ay muhiim tahay in la sugo ammaanka Manchester United iyo taageerayaasheeda, sida UEFA u sheegtay ‘Sky Sports’.
“Tan iyo isku daygii afgembigii militeri waxaa sare u kacay weerarrada argagixiso ee Turkiga, waxaa dalbanay in la damaanad qaado ammaanka dhammaan kulammada ay UEFA qabato ee ka dhacaya Turkiga” ayaa lagu yiri warbixinta.
“UEFA waxay sii wadi doontaa in ay la socoto xaaladda isla markaana talooyin siiso taageerayaasha naadiyada sida loo baahan yahay”.
Kooxda Napoli ayaa iyadana sidoo ku ciyaari doontaa Magaallada Istanbul ciyaar ka tirsan Qaybta (B) ee Champions League oo ay la yeelan doonto kooxda Besiktas.
Saudi Arabia oo sheegay inay fashiliyeen weerar aragagixiso ay la maaganaayeen ISIS kulankii isreeb-reebka koobka adduunka ay la yeesheen….